११९ वर्षीया बाटुलीको नाम ‘गिनिज बुक’मा लेखाइँदै - Postmandu
११९ वर्षीया बाटुलीको नाम ‘गिनिज बुक’मा लेखाइँदै
2021-10-29 PostmanduLeaveaComment on ११९ वर्षीया बाटुलीको नाम ‘गिनिज बुक’मा लेखाइँदै
काठमाडौं, कार्तिक १२ २०७८ । बिहान–बेलुका दूधसँग मासिनो गरी पिसेको भात अनि अरु समयमा हर्लिक्स, बिस्कुट र झोल पिएर ११९ वर्षीय सर्वज्येष्ठ नागरिक बाटुली लामिछानेको दैनिकी बित्ने गर्छ ।
परिवारमा पाँच पुस्ताको फैलावट भइसके पनि हजुरआमा लामिछाने अहिलेसम्म स्वस्थ्य देखिन्छिन् ।
दाँत झरेका कारण मुखबाट समय–समयमा केही र्‍याल आउँछ, फुलेका कपाल खासै झरेका छैनन्, आँखा तेजिला देखिन्छन् ।
बोली स्पष्ट नभए पनि अरुले कानमा पुगेर भनेका कुरा सुन्ने र बुझ्न सक्छिन् ।
नजिकै आएकालाई शरीरको हाउभाउबाट प्रतिक्रिया दिनसक्ने हजुरआमाका आमा लामिछाने सम्भवतः विश्वकै ज्येष्ठ नागरिक भएकाले उहाँको नाम ‘गिनिज बुक अफ वल्र्ड रेकर्ड’ मा दर्ज गराउने अन्तिम तयारी भएको छ ।
लामिछाने विश्वकै ज्येष्ठ नागरिक भएको उहाँको स्वास्थ्य परीक्षणबाट पनि पुष्टि भइसकेको छ ।
हालसम्म विश्वमा ११८ वर्षीय जापानी नागरिक काने तानाकाको नाममा उक्त रेकर्ड देखिएको छ ।
उनी झण्डै पाँच घण्टासम्म एकै ठाउँमा रहेर अरुले लगाइदिएको खादा, दोसल्ला ओढेर बसिन् र सहभागीको आकर्षणको केन्द्र भइरहिन् ।
‘मलाई आशीर्वाद दिनुस् आमा’ भन्दै खुट्टा ढोग्न पुग्नेलाई टाउकामा हात राखिदिने, ‘मलाई चिन्नुभो ?’ भन्नेहरुलाई एकछिन हेरेर हाँसिदिनेजस्ता उहाँका व्यवहार टाढाबाट त्यहाँ पुगेकाका लागि अप्रत्यारिला लाग्थे तर उनलाई वर्षौैँदेखि देखिरहेका छिमेकी केदार भण्डारी भन्छन्, “उहाँ बलियो हुनुहुन्छ, अझै केही वर्ष केही हुँदैन, तर राज्यले उहाँलाई विश्वकै ज्येष्ठको पहिचान दिलाउन भने ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।”
लामिछानेका ८१ वर्षीय छोरा नेत्रप्रसाद लामिछाने रातिको समयमा आमालाई पिसाब आउँदा उठेर हिँड्न पनि सक्ने र त्यसक्रममा लड्नसक्ने भएकाले एक जनाले नियमित रेखदेखको काम गर्ने गरेको बताउँछन् ।
बुहारी ईश्वरी लामिछानेका अनुसार सासुआमालाई हालसम्म कुनै गम्भीर रोग नभएकाले उपचारका लागि अस्पताल लैजान नपरे पनि पछिल्लो समयमा कहिलेकाहीँ ज्वरो आउने भएकाले औषधि खुवाउने गरिएको छ ।
नेपालमा सय वर्षमाथिका नागरिक करिब चार हजार छन् ।
प्रदेशका निवर्तमान कृषि राज्यमन्त्री मैनालीको प्रदेश विकास कोषको रु १० लाख र अन्य सहयोगमा हाल लामिछाने बस्दै आएको स्थलभन्दा माथिल्लो बारीमा एक वर्ष लगाएर उक्त एकतले भवन निर्माण गरिएको फाउण्डेशनका अध्यक्ष भवानी दाहालले जानकारी दिए ।
मैनालीले लामिछानेलाई मासिक रु पाँच हजार खर्च पनि दिँदै आएका छन् भने गाउँपालिकाले मासिक रु १० हजार भत्ता दिँदै आएको छ ।
सो भवन निर्माणका लागि छिमेकी देवकी धितालले आठ आना जग्गा दान गरेका थिए ।
ककनीस्थित प्रहरी चौकीबाट चार किलोमिटरको ओरालो मोटरबाटोमा रहेको यस स्थानको जग्गाको मूल्य हाल प्रतिरोपनी करिब रु १२ लाख रहेको छ ।
उक्त वडाका वडाध्यक्ष एवं नेकपा (एमाले) का ककनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष शेषमान लामाले विश्व रेकर्ड कायम गर्न स्थानीयस्तरबाट सबै प्रक्रिया पूरा भइसकेको बताए ।
कार्कीले ज्येष्ठ नागरिकलाई बोझ नभई आदर्श र देवताका रूपमा लिन आग्रह गरे ।
कोषका तत्कालीन अध्यक्ष रामकृष्ण कर्माचार्यसहितको टोलीले दुई वर्षअघि लामिछाने ११७औँ वर्षमा प्रवेश गरेका अवसरमा उनको निवासमा पुगेर शुभकामनासहित अभिनन्दन गरेको थियो ।
त्यसयता गिनिज बुकमा नाम लेखाउन पहल गर्दै आएका कर्मार्चाले उक्त प्रक्रिया अब अन्तिम चरणमा रहेको बताए ।
ज्येष्ठ नागरिक क्षेत्रका अर्का अभियानकर्मी मोहन केसीले नेपालमा जेनेटोलोजीबारे शिक्षण संस्था र अस्पताल हुनुपर्ने माग गरे ।
स्थानीय राजनीतिकर्मी काशीनाथ अधिकारीले गिनिज बुकमा नाम लेखाउन सङ्घीय सरकारबाट पहल हुनुपर्ने र कम्तीमा नेपालभरिको ज्येष्ठ नागरिक भनेर प्रमाणपत्र दिन ढिलाइ गर्न नहुने आग्रह गरे ।
विदेशमा रहेका नेपालीको यसरी गर्दैछ सरकारले उद्दार
2020-05-29 2020-05-31 Postmandu
‘नक्सा जारी गरेपछि भारतले प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन खोज्यो’
डा. केसीलाई करिश्माले पनि भेटिन्ः कस्तो छ केसीको स्वास्थ्य अवस्था ?
2018-07-20 2018-07-21 Postmandu